डिभिजन टू : झिनो रनले च्याम्पियन बन्न चुक्यो नेपाल, पारसको विष्फोटक ब्याटिङ - Internet Khabar
Home Sports डिभिजन टू : झिनो रनले च्याम्पियन बन्न चुक्यो नेपाल, पारसको विष्फोटक ब्याटिङ
डिभिजन टू : झिनो रनले च्याम्पियन बन्न चुक्यो नेपाल, पारसको विष्फोटक ब्याटिङ
काठमाडौं . आइसीसी डिभिजन टूको फाइनलमा २७८ रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेपाल युएईसँग ७ रनले पराजित भएको छ। २७८ रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २७० रन मात्र बनाउन सक्यो।
नेपालले सातौँ विकेटका रुपमा करण केसीलाई व्यक्तिगत २ रन बनाएको अवस्थामा गुमाएको छ । करणले बुधबार नेपाललाई अविश्वशनीय जित दिलाएका थिए । मात्र २ बल सामना गरेका केसीलाई अमिर हायातले पेभेलियन फकाईदिए।
त्यस्तै छैटौँ विकेटका रुपमा नेपालले रोहित पौडेललाई गुमाएको थियो। उनले २३ रन बनाएका थिए। नेपालको पाँचौ ११ बलमा ७ रन बनाएका आरिफ शेखलाई इमरान हैदरको बलमा अहमद राजाले क्याचआउट गरे।
नेपालले चौथो विकेटका रुपमा शरद भेषावकर(३०) लाई गुमाएको छ। उनले ३७ बलमा ३ चौकासहित ३० रन जोडेका थिए । उनलाई अमिर हायातको बलिङमा इमरान हैदरले क्याचआउट गराए। त्यस्तै तेस्रो विकेटका रुपमा नेपालले दिपेन्द्रसिह ऐरीलाई गुमाएको छ । ऐरीले ६६ बलमा २ छक्कासहित ३५ रन बनाएर आउट भए।
ओपनर दिलिप नाथलाई गुमाएको केही बेरमा नेपालले उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पनि गुमाएको थियो । मल्ल २४ रन बनाएर आउट भएका हुन् । उनलाई अमिर हायातको बलमा अस्फाक अहम्मदले क्याचआउट गरेका हुन्। नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यान दिलिप नाथ २९ बलमा २ चौकासहित १३ रन बनाएर आउट भएका हुन् । उनलाई रोहन मुस्तफाले आउट गरेका हुन्।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाललाई २ सय ७८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । युएइका लागि अस्फाक अहमदले सर्वाधिक १ सय १४ रन बनाएर आउट भए भने गुलाम साबेर १८ रन, रोहन मुस्ताफा ५१ रन, साहिकर अनवारले ४० रन बनाएर आउट भए । रामिद साहज ४१ रनमा नटआउट रहँदा मोहम्मद उस्मान २ रनमा नटआउट रहे।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने, बसन्त रेग्मी र सोमपाल कामीले १र १ विकेट लिए । युएइका एकजना ब्याटम्यान रन आउट भए ।
Previous articleमहिनावारी रोकिनु अगाडि गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ?
Next articleप्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा